Izingane eziningi ziyathunjwa, elinde izinyanga eziyishumi nambili senzekile New Year. Bona usungula Christmas zokubhukuda, babhalele uSanta Claus, cabanga ukuthi kuyoba ukuhlobisa Isihlahla sikaKhisimusi ukuphupha ngani okuvela isimangaliso.
Ngeshwa, ngokoqobo ngokuvamile kushafiswe ingane. Matinee ngesikhathi okunethezeka wamukelekile esikhundleni iqhwa kid ubudala ihlangabezana umzanyana wakhe imiswe okwesikhashana ku intshebe futhi uthisha ngenkuthalo udlala indima Eqhweni Ntombazane. Bobabili "abadlali" kalula ukwamukela amaqembu ngisho izingane ezincane kanye izingane zazikhula, lo nzima ukubona othisha e izinhlamvu zabo lwasemaphusheni. Umlingo kulahleka.
Ukuze indlela isikhathi ebuntwaneni izingane isidingo eside ukuhlela iholide ochwepheshe. Ukuze wenze lokhu, kukhona inkonzo ezifana ucingo Santa Claus. Nge umlingisi kweqiniso Christmas party zizoshintsha kakhulu.
Awu umcabango ukuphuma simo, professional umdlalo umculo kuzovumela ingane yakho shí emkhathini lokhu inganekwane. Yiqiniso, enkulisa othisha bazokwazi sithathe umdlalo a Matinee, ukuzijabulisa, beveza iskripthi, kodwa ngaleso sikhathi kuyoba isilandelwa nezingane amasonto ambalwa. Ingabe a Matinee yinto emnandi?
Ezikoleni, uNcibijane umkhosi, ihlelwe ku abazali babo nothisha abafundi abasebasha futhi, sihamba hhayi ngentshiseko kakhulu. Hhayi ngaso sonke isikhathi kungenzeka phakathi kothisha ukuthola abantu omkhulu oyibamba ikhono. Thishela efanayo bagqoke up in izevatho namaqhawe, futhi zonke umfundi bona kalula aqaphele. Ngenxa yalokhu, ilahlekelwa isithakazelo, uwela isiyalo, iholide eside elindelwe liphenduka ekuchithweni.
Futhi kukhona kuphela ukuze Santa Claus, nakho konke zizoshintsha. Yiqiniso, i-seven- nonyaka ayisishiyagalolunye-izingane baye bayeka ukukholelwa ukuthi ukhona Fairy umkhulu, kodwa oyibamba okuhle, entsha, eyenzelwe bonke ubudala, imidlalo, iskripthi ezithakazelisayo eyabhalwa ochwepheshe, kuyogcina izingane voltage kwenjabulo kuzokwenza eziningi ezithakazelisayo, izohamba izinkumbulo emangalisayo . Ngisho nicer wafunda inkondlo ukutshela kumkhulu wakhe begqoke nge nesilevu zikanokusho, kunokuba uthisha isudi Snow Maiden.
Santa Claus angamenywa hhayi kuphela izikole noma izinkulisa, abazali abaningi kakade ngaphezu konyaka ammemele ekhaya lakhe. It is hhayi kakhulu nomthelela wallet yakho, futhi uthole injabulo enkulu izingane.
Ngaphezu kwalokho, umhlangano iqhawe kaNcibijane zingahlelwa hhayi kuphela ekamelweni. Esikhathini esikole, ezindaweni enkulisa, ephezulu liphumele izakhiwo egcekeni - konke ukubukeka inganekwane kuzokwenza esinokuduma injabulo. Izakhamuzi cottage nemizana futhi enza ungenza isimangaliso Christmas ilungelo eduze kwemithi. Thola Snow White ezinyathelweni eqhweni, ukuhlangabezana Santa Claus phakathi fir-izihlahla - uhlobo magic ngeke kukhohlakale.
Ngisho isipho, wanika ngokuvakashela Santa Claus, kuyoba imilingo. amagilavu Ezivamile ezandleni umkhulu wakhe jikisa amagilavu ukuze ukumodeliswa weqhwa, izimpawu kuyoba magic wands, izicathulo esikhiphekayo for engadini - ingilazi Slippers noma amabhuzu - ukugijima phambi kwakhec.
Nakuba izingane ukukholelwa ezimangalisweni, kudingeka banikeze inganekwane.
Isipho umuntu ngosuku lokuzalwa: yini ukukhetha?
Yini kungcono ukukhetha isipho ngo-February 23, esisebenza
Christmas eMelika nakwamanye amazwe
Yeka yasekuqaleni lokuzalwa ukubingelela uPapa ukuba kwenzeke?
Izincwadi njengehlobo lobuciko, isizukulwane kanye nezinhlobo zazo
Ngokomzwelo nokutubeka syndrome - hhayi emzweni odlulayo, kodwa inkinga
Ukubika ngezimpahla: ezinye izici
Yini izinhlelo ezidingekayo imidlalo ku-Windows
Kolotov uVladimir Maksimovic, sniper: Biography
Tarot ikhadi "UDeveli": ukubaluleka amakhadi eqondile nabokhulumile